Ọkpara mechara bụrụ onye ndu ndị otu NCNC ka Naịjirịa nweere onwe ya n'afọ 1960. Ọ bụkwa onye isi ala ọwụwa anyanwụ Naịjirịa n’oge ọchịchị mbụ ahụ bido n’afọ 1959 ruo n’afọ 1966. Ọ lanahụrụ ihe ike na nnupụisi ndị okpuigwe jiri chụpụ ndị ọchịchị ntụliaka, ebe ndị isi ala abụọ ka ya tụfuru ndụ ha. E soro nwụchikọ ma kpọchie ya mgbe ahụ ndị okpuigwe naghaara ndị ndọrọndọrọ ọchịchị n’ọnwa Jenụwarị n’afọ 1966.
Ọkpara echezọghị ebe o si ya mere o jiri kwenye na ọ bụ ọrụ ugbo ga-azọpụta ma gbanwe Naịjiria otu ọ ga-esi dị mma. O jisiri ike nwee nnukwu ugbo a kpọrọ Ụmụegwu Ọkpụala Mixed Farms n’ime obodo ya iji mezuo ebumnuche ya. Nke a kpaliri mmụọ ọtụtụ ndị isi ala ọwụwa anyanwụ iso nzọ ụkwụ ya n’ihe gbasara ịkọ ọrụ ugbo. Ọ kwadokwara mmụta na mmepe ala Igbo nakwa ọwụwa anyanwụ ebe ọ dị ukwu.
Ọtụtụ ndị mmadụ kwenyere na ọ bụ oge Dọkịta Michael Ọkpara bụ onye isi ala ọwụwa anyanwụ Nigeria ka mpaghara ahụ hụrụ ihe. Dọkịta Ọkpara gbanwere mpaghara ọwụwa anyanwụ o si na mpaghara kachasị da ụbịam ghọrọ mpaghara Kwụsikarịchara ike nakwa nke na-eto eto. N'ime naanị afọ isii malite n’ọnwa Jenụwarị n'afọ 1960 ruo n'afọ 1966, mpaghara ọwụwa anyanwụ ghọkwara mpaghara kachasịrị nwe udo. Obodo dịgasị na mpaghara ọwụwa anyanwụ bidoro sọwa mpi n'ime onwe ha maka mmepe.
Mgbe agha Biafra biri, Ọkpara gbapụrụ ga biri na mba Ireland. Dọkịta Iheọnụkara Ọkpara arụnwughị ụlọ nke ya ihe niile ọ nọrọ n'ọchịchị gọọmenti. Mana tupu o si mba Ireland loghachite azụ n’afọ 1979 maka ndọrọndọrọ, ndị enyi ya gbakọrọ aka ọnụ wuoro ya ụlọ n'obodo ya bụ Umuegwu.
Okpara nwụrụ n’abalị iri na asaa n’ọnwa Disemba n’afọ 1984 (17 December 1984).
Ka mkpụrụ obi Iheọnụkara zuru ike n’ime Chineke.
Ezigbo mmadụ adịghị fechaa
Agbụrụ, asụsụ na omenala Igbo gaa-adị!
Mbipụta n'òtù: Ndị Igbo na-echeta
A gụọla ya ugboro 135